मुक्तिनाथ विकास बैंकले घाेषणा गर्याे लाभांश, कहिलेसम्म पाईने ? - सिधा मिडिया
मुक्तिनाथ विकास बैंकले घाेषणा गर्याे लाभांश, कहिलेसम्म पाईने ?
१४ कार्तिक २०७८, आईतवार ११:०० मा प्रकाशित
मुक्तिनाथ विकास बैंक (MNBBL) ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको कार्तिक १२ गते शुक्रबार बसेको बैठक लाभांश प्रस्ताव गरेको हो।
बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १७.५७ प्रतिशत बोनस शेयर र उक्त बोनसको कर प्रयोजनको लागि ०.९२ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात बैंकको आगामी १५ औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि शेयरधनीले पाउनेछन्।